नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च ४५१ जनामा कोरोनाको पुष्टि , कुल संख्या ६२११ पुग्यो #Covid19 • Health News Nepal
नेपालमा थप ४५१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप ४५१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजेटिभ देखिएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार ४५१ जनामा संक्रमण देखिएको हो । आज थपिएका ४५१ सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या ६ हजार २ सय ११ पुगेको प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६७ जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या १०४१ पुगेको छ । जसमध्ये पुरुष ९३७ र महिला १०४ जना छन् । कुल संक्रमितमध्ये १९ जनाको ज्यान गएको छ । प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार हालसम्म देशका ७३ जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि आज अहिलेसम्मकै उच्च सन्क्रमित ६८ जना थपिएका छ्न।